ကျွန်တော်နှင့် အရှုံးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ကျွန်တော်နှင့် အရှုံးများ
Posted by ရင် နင့် အောင် on Aug 24, 2012 in Drama, Essays.. | 16 comments
ကျွန်တော်ဟာ ငယ်ငယ်က ကျားကစားခြင်းကို ၀ါသနာကြီးခဲ့ဖူးသည်။ ကျားကစားခြင်းအလေ့အထကို ကျွန်တော့် အဘိုးဆီက ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘိုးသည် ကျွန်တော့်ကို ကျားကစားနည်းသင်ပေးပါသည်။ ကျွန်တော် ခြောက်နှစ်သားလောက်ကတည်းက ကျားကစားရသည်ကို ၀ါသနာပါခဲ့ပါသည်။ အဘိုးကို အနိုင်ရဖို့ ကျွန်တော် အပြင်းအထန် လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ သို့သော် မနိုင်ခဲ့ပါ။ အဘိုးက ကျား သုံးကောင်ကျ အသာစီးပေးကစားသည်ကိုပင် ကျွန်တော် မနိုင်ခဲ့ပါ။ ရှုံးခဲ့ပါသည်။ ထို အရှုံးကို ကျွန်တော် လက်မခံချင်ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်ရှုံးခါနီးတိုင်းတွင် ကျားကုန်ပြောင်းဆော့ပါသည်။ (ကျားကုန်ဆိုသည်မှာ အရင်ကုန်တဲ့သူ နိုင်ပါသည်။) တစ်ခါ တစ်ခါကျတော့လည်း အဘိုးဘက်က ကျားကို ကျွန်တော် ခိုးပါသည်။ အဘိုးက မျက်စိမကောင်းပါ။ မြင်သည့်အခါ မြင်သော်လည်း မမြင်သည်က များပါသည်။
ထိုသို့ဖြင့် အဘိုးနဲ့ ကျွန်တော် ကျားကစားရင်း နောက်ပိုင်းတွင်တော့ ကျွန်တော် လက်ရည်တက်လာပါသည်။ အဘိုးသည် ကျားသုံးကောင်ကျမှ နှစ်ကောင်၊ တစ်ကောင်၊ နောက်ဆုံး တစ်တန်းတည်း အတူတူ ကစားလာရသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော် နိုင်၍ တစ်ခါတစ်ခါ အဘိုးနိုင်သည်ဖြင့် ကျွန်တော် လက်ရည်တက်လာပါသည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော် တစ်ပွဲပွဲ ရှုံးလျှင် ထိုအရှုံးကို လက်ခံနိုင်လာသည်။ ဘာကြောင့် လက်ခံနိုင်ပါသလဲဟု အခုအခါ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျွန်တော် ပြန်နိုင်နိုင်ချေ ရှိပြီဟု ယုံကြည်မှု ရှိနေခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်လာပါသည်။ ယုံကြည်မှုနှင့် မျှော်လင့်ချက်သည် အရှုံးကို ပကတိ လက်ခံနိုင်လာပါသည်။
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀တွင် စာကို သူများထက် ပိုလုပ်သည့် လူစာရင်းထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ တက်ခဲ့ကြသော ကျူရှင်တွင် ကျွန်တော်သည် အမြဲလိုလို ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ စာရင်းထဲတွင် ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျူရှင်မှ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်နှင့် ကျွန်တော်သည် အပြိုင်အဆိုင် ဆုစာရင်းတွင် နေရာယူနေကြဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကသာ ကျွန်တော့်ကို ပြိုင်ဆိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် စိုးစဉ်းမျှ သူတို့ကို လိုက်ပြိုင်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။
တကယ်တမ်း ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးကို ဖြေပြီး အောင်စာရင်းထွက်လာချိန်မှာတော့ ထိုကောင်မလေးထဲက တစ်ယောက်သည် လေးဘာသာ ဂုဏ်ထူးပါပြီး ကျန်တဲ့ ကောင်မလေးနှင့် ကျွန်တော်သည် တစ်ဘာသာ ဂုဏ်ထူးနှင့်သာ အောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကျူရှင်တွင် ကျွန်တော်၏ အစ်ကိုဝမ်းကွဲတစ်ယောက်လည်း ရှိပါသည်။ သူသည် ကျွန်တော့်လို ပ၊ဒု၊တ တွင် မပါရှိခဲ့သော်လည်း စာမေးပွဲကြီးအောင်စာရင်းထွက်တော့ သူသည်လည်း လေးဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်ခဲ့ပါသည်။
ဒီကိစ္စတွင် ကျွန်တော် ရှုံးခဲ့ပါသလား။ ကျွန်တော် မရှုံးခဲ့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော် သူတို့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်နှင့်ကော ကျွန်တော့် အစ်ကိုဝမ်းကွဲနှင့်ပါ မပြိုင်ဆိုင်ခဲ့၍ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲပြီးသောအခါ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဘောလုံးကန်သည့် ပလေးစတေရှင် ဂိမ်းကို သင်ပေးပါသည်။ ကျွန်တော် မဆော့တတ်ပါ။ သူရှူးသမျှ ကျွန်တော် ဂိုးပေးရတာချည်း။ နောက်ပိုင်းတွင် နောက်ထပ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ ဂိမ်းဆော့ကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက် အားတိုင်း ဂိမ်းဆော့ဖြစ်ကြသည်။ သင်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကသာ အမြဲလိုလို နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် မကျေနပ်ပါ။ နိုင်ချင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အားတိုင်းလိုလို ဂိမ်းဆော့ပြီး သူ့ကို နိုင်ဖို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ တကယ်ပဲ ကျွန်တော် ဂိမ်းကို ကောင်းမွန်စွာ ဆော့တတ်လာခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး ကျွန်တော့်ကို ငါးပွဲတွင် တစ်ပွဲလောက်သာ နိုင်လာကြတော့သည်။
ထိုသို့ ကျွန်တော်ကချည်း နိုင်လာသော အခါတွင် ကျွန်တော် သူတို့နှင့် မဆော့ချင်တော့။ ပျင်းဖို့ကောင်းလာပါသည်။ အရှုံးကို လက်မခံစဉ်က ကျွန်တော်လိုချင်သည့် အနိုင်သည် အခုအခါ ဘာမှမဟုတ်ပြန်တော့။ အခုအခါ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါသည်။ အချို့သော အရှုံးများသည် ကိုယ့်အတွက် မလိုအပ်သော၊ အရေးမကြီးသော အရှုံးများဖြစ်ကြပါသည်။ အချိန်အကုန်ခံ၍ အနိုင်ရဖို့ ကြိုးစားနေရန်မလိုပါ။
ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ်တက်ကြတော့ ငယ်ငယ်တုန်းကလို မလိမ္မာကြတော့။ လူငယ်ပီပီ လူကြီးမသိအောင် ခိုးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားလာကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ အများဆုံးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာက ဖဲရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းလစ်ပြီး ဖဲရိုက်ကြပါသည်။ ကျွန်တော့်ကို သူငယ်ချင်းတွေက ဖဲရိုက်နည်းသင်ပေးကြပါသည်။ ဖဲနှစ်ချပ်ကို ထပ်၍ ပွတ်ကြည့်ရသော အရသာကို ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်း နှစ်သက်စွဲလန်းလာခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဖဲရိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ အစက ငါးဆယ်ကြေး၊ တစ်ရာကြေးကနေ ထောင်နှင့် သောင်းနှင့် အထိဖြစ်လာပါတော့သည်။
ဖဲသည် ကံတရားနှင့်လည်း ဆိုင်ပါသည်။ ရှုံးသည့်အခါ ရှုံးမည်သာ။ ထိုအရှုံးကို လက်မခံနိုင်ပါက ထပ်ရိုက်၍ ပိုရှုံးသွားတာမျိုးလည်း ရှိသလို ထပ်ရိုက်၍ ပြန်နိုင်လာသည်လည်း ရှိနေပါသည်။ မသေချာပါ။ လောင်းကစားတို့မည်သည် မသေချာမှုများကတော့ အနည်းနှင့် အများရှိနေတတ်ပါသည်။ တစ်ခါ တစ်ခါ ကျွန်တော်နိုင်ပါသည်။ သောင်းနှင့် ချီ၍ နိုင်သော်လည်း ထိုငွေသည် ကျွန်တော့်အတွက် ဘာမျှ အဖတ်မတင်ဘဲ လျှောက်သုံးစွဲရင်းသာ ကုန်သွားပါသည်။ ကိုယ်ရှုံးသောအခါတွင်တော့ ပိုက်ဆံသုံးစရာမရှိ ဒုက္ခရောက်ရပါသည်။ အချို့သော အနိုင်များသည် ဘာမျှ အဖတ်မတင်သော်လည်း ရှုံးလျှင်တော့ ဒုက္ခမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါသည်။
အလုပ်ထဲသို့ ရောက်သောအခါတွင် ကျွန်တော် အများကြီး လူကြီးဆန်ဖို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာများကို လေ့လာရင်း အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ကျွန်တော့် ကြိုးစားမှုကြောင့် ကျွန်တော်သည် ရာထူးကြီးသော နေရာသို့ သူများထက် လျှင်မြန်စွာ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအဖြစ်ကြောင့် ကျွန်တော့်ကို မနာလိုသူများ၊ မလိုမုန်းထားသူများ ရှိလာပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်၍ နေထိုင်သော်လည်း သူတို့သည် ကျွန်တော့်အပေါ် မကောင်မြင်စွာ ပြောဆို ဆက်ဆံမှုတွေ များလာပါသည်။ သို့သော် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်က အဆင်ပြေအောင် နေထိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် လူသည် လူပဲ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ထိုသို့ကောင်းစွာနေထိုင် လုပ်ကိုင်နေသည့်ကြားက ကျွန်တော် အလုပ်ထဲတွင် အမှားအယွင်းတစ်ခုကို လုပ်မိသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်သောအခါ ကျွန်တော့်အမှားကို ကျွန်တော်တာဝန်ယူရင်း အလုပ်က ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရပါသည်။ ကျွန်တော် ရှုံးသွားပါသလား။ ထိုကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ ကျွန်တော် မခံစားနိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့၊ ကြိုးစားခဲ့သမျှ သဲထဲ ရေသွန်ဖြစ်ခဲ့ပြီဟု ကျွန်တော် အရှုံးထဲတွင် ပက်လက်မျှောခဲ့ရပါသည်။
ထို့နောက်တွင်တော့ ကျွန်တော် တခြားအလုပ်တွေ ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ လူဆိုသည်မှာ အချို့နေရာတွင် ခေါင်းဆောင်၊ အချို့နေရာတွင် နောက်လိုက် လုပ်နေရသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ ကျွန်တော် သိတတ်လာခဲ့သည်။ အရှုံးများတွင် ပက်လက်မျှောနေရာမှ ပြန်လည် ရပ်တည်ကြည့်သည့်အခါ ကျွန်တော် မရှုံးဘဲ နေခဲ့သည်ကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။ အရင်အလုပ်တွင် ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့သော ကျွန်တော့်ရဲ့ သမိုင်း၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတို့သည် နောက်အလုပ်များတွင် များစွာ အထောက်ကူပြုခဲ့ပါသည်။
အချို့သော အရှုံးများသည် ရှုံးချင်ယောင်ဆောင်နေသော အနိုင်များဖြစ်ပါသည်။ သင်မြင်အောင် ကြည့်တတ်ဖို့သာ လိုပါသည်။
ဖတ်လို့ကောင်းသလို ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်လည်း အတွေးနက်သွားတယ်ဗျာ ! ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့ဘဝ မှာလည်း ရှုံးချင်ယောင်ဆောင်နေသော အနိုင်များ ရှိခဲ့လို့ပါပဲ ။
ရိုးသားကြိုးစားလျှင် တစ်ချိန်မှာ ထိုအကျိုးကို မုချခံစားရမည်ဖြစ်သည်
အရှုံးတွေထဲမှာ အနိုင်တွေရှိနေသလို … အနိုင်တွေထဲမှာလည်း အရှုံးတွေရှိနေကြတယ်။
“အချို့သော အရှုံးများသည် ရှုံးချင်ယောင်ဆောင်နေသော အနိုင်များဖြစ်ပါသည်။ ” အမှန်ဆုံး စကား လေး ပါ။ ဘ၀ ဆိုတဲ့ တိုက်ပွဲ ကို မှန်ကန်တဲ့ နည်း လမ်း တွေ နဲ့ ဆင် နွှဲ နေတဲ့ သူတွေ မှာ အရှုံး ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ တစ်ချိန် မှာ အရှုံး လို့ ကိုယ် သတ်မှတ် ခဲ့ တဲ့ အရာ ဟာ နောင် တချိန်ချိန် မှာ သင်ခန်း စာ အဖြစ်ပြောင်း လဲသွားတတ် လို့ ပါပဲ။
မြင်အောင် ကြည့်ဖို့ မှန် ရှာနေပါသည်။
မှန်နဲ့ ကြည့်မှ မြင်ရတာ ရုပ်ဝတ္ထုပါ …
စိတ်နဲ့ မြင်အောင်ကြိုးစားပါဗျ …
အမြဲတမ်းကြိုးစားနေသူတွေ အတွက်ကတော့ အရှုံးဆိုတာ တဒင်္ဂ ဆင်းရဲမှုတစ်ခုပါ …
“အမြဲတမ်းကြိုးစားနေသူတွေ အတွက်ကတော့ အရှုံးဆိုတာ တဒင်္ဂ ဆင်းရဲမှုတစ်ခုပါ …” အဲဒါလေးလဲ မှတ်ထားဦးမယ်ဗျာ ! နောက်တချိန် ကြုံရမဲ့ အရှုံးတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်ဖို့နဲ့ ရှေဆက်ဖို့ အင်အား ဖြစ်စေဖို့ အတွက်လေ !
ကျန်သွားတယ် — Cheer !!!!!
ဘယ်အရာကိုမျှ အရှုံးလို့မယူဆပါဘူး။ အဲဒီရဲ့တခြားတဖက်မှာ ကိုယ့်အတွက် တစ်စုံတစ်ခုကိုအမြဲတွေ့ရှိနေလို့ပါပဲ။
ရှုံးနေတဲ့ အချိန်တုန်းကတော့ အဲဒီအရှုံးတွေက တော်တော်ခါးသီးတာ
ကိုယ့်ကို ခင်လို့ ပြုံးပြတာတောင် ငါ့ကို လှောင်ရယ်နေတာလို့ ထင်တဲ့ ကာလ
ကြာလာတော့မှသာ အဲဒီအကြောင်း ပြောနိုင်တာ တွေးနိုင်တာ ရယ်နိုင်တာ
အခုတော့ လဲ အတိတ်က အရှုံးတွေက ကိုယ်အောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့ မှတ်တိုင်လေးတွေပေါ့
(ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အဲဒီမှတ်တိုင်မျိုး ထပ်မလိုချင်တော့ တာ အမှန်..)
ဒါပေမဲ့တရားပြည့်ဝတဲ့သူတွေကတော့ နိုင်ပေမဲ့မပြုံးပါဘူး။ ရှုံးပေမဲ့မမှိုင်ပါဘူး။ ဒေါသမထွက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်တရားသိလျှက်အကျင့်ခက်တဲ့။
အရှုံးတွေကြားထဲမှာ ဒါဟာအရှုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို တွေးတောလက်ခံနိုင်ဖို့ တော်တော်ခါးသီးပါမည်။
ခင်ဗျား စာတွေ တကယ်နှစ်သက်တယ်ဗျာ
ဒီမှာ လာတင်ပေးလို့လဲ ကျေးဇူးပါ
အားလပ်တဲ့ အချိန်များရှိရင် ပြန်စာလေး ပေးပါအုံး
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မသိတာလေးမေး ဆွေးနွေး ပညာယူချင်တာပါ
မန်းဂဇက်က စာအုပ်တိုက် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
စာမူပို့ပီး မရွေးရင် ပြန်စာမပေးတာမျိုး မရှိပါဘူး
နောက်ပီး စာအုပ်တွေလဲ လ်ိမ်မရောင်းပါဘူး နော်… နော် …. နော်
ဟို နာမည်ကြီး ဂျာနယ် အိုင်တီ ဆြာလို သွေးမကြီးနဲ့ နော် … နော် … နော်
စာရေးဆြာ ရင့်နင့်အောင်၏ ကွန်းမင့်အား ရည်စား အဖြေပေးတာထက် မျှော်လင့်နေသူ ..
အဟား။ ခင်ဗျား ဘယ်သူ့ကို ဆိုလိုမှန်း ကျုပ်သိတယ်။ ကျုပ် အချိန်ရတာနဲ့ ဖတ်ပါတယ်။ ကွန်မန့်သာ မပေးဖြစ်ခဲ့လို့။ ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
“ အချို့သော အရှုံးများသည် ရှုံးချင်ယောင်ဆောင်နေသော အနိုင်များဖြစ်ပါသည် ”
အဲဒါ မှန်ပါတယ် ။ သင်္ခန်းစာ ယူတတ်တဲ့ ငယ်သူတွေ အတွက် အမှန်ပဲ ။
တစ်ခုပဲရှိတယ် ၆၀ နားနီးမှ ရှုံးလိုက်ရင်တော့ ။
နောက်တစ်ခါ ပြန်နိုင်ဘို့ အချိန် မကျန်တော့ဘူး ။
နောက် ဘဝ ကျမှပဲ ပြန်နိုင်ဘို့ ကြိုးစားတော့ ။
အရမ်းဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့ အရေးအသားပါပဲ………… ဖတ်ပြီးသွားတဲ့ အခါ အတွေးတစ်ခု ကျန်သွားတယ်…
ငါရော အဲလို အရှုံးထဲ က အနိုင်ရတာလား….. ဒါမှမဟုတ် အနိုင်ရသလို ရှုံးသွားခဲ့ဖူးလား ဆိုတာမျိုး စဉ်းစားမိတယ်……..